अर्को साल बिहे गर्छु; छुट्टी मिलाएर दुई महिना अघि नै आइज है बुनु” भनेका दाजुको कसरी म,लामी जान सकूँ ? (भिडियो सहित) – Nepali in Australia
February 24, 2021 adminLeaveaComment on अर्को साल बिहे गर्छु; छुट्टी मिलाएर दुई महिना अघि नै आइज है बुनु” भनेका दाजुको कसरी म,लामी जान सकूँ ? (भिडियो सहित)
मोरङ -साढे दुई वर्षदेखि अमेरिकामा थिइन्– दुर्गा बास्तोला (सदीक्षा)। पाइलटको तालिम लिन अमेरिका जानुअघि दुर्गा नेपालमै ‘एयर होस्टेस’ को काम गर्थिन्। पहिले सौर्य एरलाइन्सको ‘एयर होस्टेस’ भएर काम गरिन्। त्यसपछि श्री एयरलाइन्सको प्रमुख एयरहोस्टेस जिम्मेवारी निभाइन्। त्यसपछि उनलाई पाइलट बन्ने जोश जाग्यो। अनि अमेरिका हानिइन्– पाइलट तालिम गर्न। अमेरिकाको टक्सासस्थित ‘डेल्टा क्वालिफ्लाइट एभिएसन एकेडेमी’ मा तालिम चलिरहेको थियो।
गतको पुस ५ गते उनको फोनको घण्टी बज्यो। फोन घरबाट आएको थियो। खबर पाइन्– दाजु प्रवीणको र’हस्यमय मृ’त्यु भएको। दाजुको नि’धन खबरले उनको हो’शहवास उ’ड्यो। तत्काल नेपाल आउने नि’धो गरिन्। रातारात टिकट मिलाइन्। मृ’त्युको खबर सुनेको तेस्रो दिन नेपाल आइपुगिन्। दुर्गाले भनिन्, ‘दाइ नरहेको खबर सुन्दा मेरो होश उड्यो। म कसरी नेपाल पुगेँ, पत्तै पाइनँ।’ नेपाल आएर उनले दाजुको ह’त्याको अनुसन्धानको माग गर्दै इ’लाका प्रहरी कार्यालय, उर्लाबारीमा बाबुको नामबाट शं’कास्पद व्यक्तिको नाममा कि’टानी जा’हेरी दर्ता गराइन्।
दाजुको मृ’त्युले स्त’ब्ध दुर्गालाई इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक उद्धव पोखरेलले आश्वासन दिए– अनुसन्धान चु’स्त हुन्छ, ह.त्या हो कि भवितव्य हो न्यायोचित ढं’गले यथार्थ पत्ता लाग्छ। प्रहरी निरीक्षक पोखरेलको कुराले दुर्गा ढुक्क भइन्। दुर्गाले भनिन्, ‘इन्स्पेक्टरले पछि सोधखोज गर्दा त आ’लटाल गरेजस्तो लाग्यो। घटनाको मु’द्दा के हुँदैछ भनेर सोध्दा पनि उल्टै रि’साउने, झ’पार्ने गर्न थाले।’ दुर्गालाई श’ङ्का लाग्यो– प्रहरीले केही ग’ड्बड गरेको छ। अनि उनले प्रहरी अनुसन्धानको चा’सो लिन थालिन्। प्रहरीले सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेस गरेका कागजपत्र प’ल्टाएर हेरिन्।
सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेस गरेको फाइलमा पो’ष्ट’मा’र्ट’म रिपोर्ट पेस गरिएको थियो। त्यसमा लेखिएको देखिन्– ‘सामान्य मृ’त्यु’। त्यति मात्र हैन, उनले फाइलमा आफ्नो दाजुको नाममा अर्कै मान्छेको फोटो राखेको समेत फेला पारिन्। घटनाबारे सबै कुरा जानकारी हुँदाहुँदै प्रहरी निरीक्षकले ग’लत म’नसायले फोटो परिवर्तन गरेको भन्ने उनलाई लाग्यो। उनले घटनालाई झनै च’नाखो भएर हेरिन्। उनलाई लाग्यो– र’हस्यमय मृ’त्युलाई प्रहरीले नै सामान्य बनाएको र दाजुका हत्यारालाई प्रहरीले उ’म्काउन खोज्दै छ।
त्यसपछि दुर्गा प्रहरी कार्यालयबाटै ‘फेसबुक’ मार्फत् घ’टनाको प’र्दाफास गर्ने भन्दै ‘लाइभ’ गरिन्। प्रहरी निरीक्षक पोखरेलको क’ठालो समाइन्। प्रहरीले उनलाई प्रहरी कार्यालय बाहिर निकाल्न खोज्यो। गाँउलेहरुले पनि दुर्गालाई साथ दिए, प्रहरी कार्यालय घे’राउ गरेका थिए। प्रहरीले आर्थिक लाभ लिएर घ’टना मिलाउन खोजेको र अ’पराधीलाई भगाएको भन्दै अहिले गाँउलेले दिनहुँ प्रहरी कार्यालयमा आ’न्दोलन गर्ने गरेका छन्। दुर्गाको फेसबुक लाइभले द’बाब अभियान आ’न्दोलनमा परिणत भएको छ ।
उनलाई स्थानीयबासीले साथ दिएका छन् । उनलाई अहिले संसारभरिबाट साथ मिलेको छ । सबैले साहसी महिलाको संज्ञा दिन थालेका छन् । प्रवीण बास्तोला गत पुष ५ गते शंकास्पद अवस्थामा मृ’त भेटिएका थिए। उनी राती साथीहरुसँग बसेको कोठामा बिहान मृ’त फेला परेका थिए । अहिले आफ्नो दाजुको न्या’यको लागि ल’डी रहेकी उनै सदिक्षाको साथमा लाखौ नेपालीहरु उ’भिएका छन ।भिडियो Source:esidhakura